SV: Norway 1500 qof qoxooti ah Giriiga haka soo qaadato. - NorSom News
SV: Norway 1500 qof qoxooti ah Giriiga haka soo qaadato.
Xisbiga mucaaradka ah ee SV ayaa maanta sheegay inay dowlada Norway u gudbiyeen codsi rasmi ah oo ku saabsan inay Norway ka qeybqaadato samatabixinta kumanaanka qoxootiga ah ee ku sugan xuduudka dalalka Turkiga iyo Giriiga.
SV ayaa sheegay inay dowlada ka codsanayaa inay booskeeda ka qaadato sidii dab u dajin loogu sameyn lahaa caruurta iyo qoxootiga kale ee dhibaatooyinka u nugul, xiligaana ku sugan dalka Giriiga. Waxeyna sheegeen in ee xuduudka ku dhiban.
Waxeyna codsiga Norway kusoo aadeysaa xili midowga Yurub uu codsaday in dal walba uu qeyb ka qaato dib u dajinta qoxootiga ku xaniban dalka Giriiga.
Xigasho/kilde: SV foreslår at Norge tar imot 1 500 asylsøkere fra Hellas.
Previous articleMaxkamada xuquuqul insaanka Yurub oo Norway mar kale ku xukuntay 2 kiis oo barnevern ah.
Next article(Hada): Wasiirka difaaca Norway oo karantiilis lagu sameeyay, Cabsida Corona-Virus.